नेप्से-प्राविधिक(Nepse Technical ) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
एक वर्षमै चारगुणाले बढेको अप्पर तामाकोशीको सेयरभाउ अब के होला ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपालमा जलविद्युत आयोजनालाई ‘सेतो सुन’ पनि भनेर चिनिन्छ। जलविद्युत आयोजनाहरुले सञ्चालनमा आएको १५ वर्षसम्म सरकारलाई तिर्ने करमा सहुलियत पाउने हुँदा पनि लगानीकर्ता जलविद्युतमा आकर्षित हुन्छन्। त्यसका अलवा जलविद्युत कम्पनीहरुको प्रतिफल पहिले नै निश्चित तथा नियमित हुने हुँदा पनि लगानीकर्ताको...
प्राविधिक रुपमा २०७८ सालको सेयर बजारलाई फर्केर हेर्दा
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । साल २०७८ लाई फर्केर हेर्दा नेपालको सेयर बजार इतिहासमै अविष्मरणीय रह्यो। सेयर बजारको २८ वर्षे इतिहासमा यही वर्ष भदौ २ गते नेप्सेले हालसम्मकै उच्च ३१९८ विन्दु चुमेको थियो। सूचकमात्रै नभएर यो वर्ष एकैदिन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएर भोलुम र कारोबारको हिसाबले पनि बजार सम्झनायोग्य...
प्राबिधिक रुपमा बजार अझै बुलिस, २४६० विन्दूसम्म झरेर ४३०० सम्म पुग्नसक्ने
-अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयरबजारमा दसैं अगाडि हराएको रौनक यो साताको २ वटा सुरुवाती कारोबार दिनमा पनि आउन सकेको छैन । बिगत दश कारोबारलाई हेर्दा सेयर कारोबार रकम र भोल्युम दुवैमा गिरावट भएको देखिन्छ । बिगतका १० वटा कारोबार ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको देखिन्छ । यसले लगानीकर्ता 'पर्ख र हेर'को अबस्थामा भएको बुझिन्छ । आइतबारको...
प्राविधिक आधारमा यस्तो देखिन्छ बजारको अवस्था, कति–कतिमा होला प्रतिरोध ?
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आधारभूत विश्लेषणजतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ प्राविधिक पक्ष। आधारभूत पक्षले कम्पनी छनोटलाई जनाउँछ भने प्राविधिक पक्षले छानिएको कम्पनीलाई कुन समयमा कारोबार गर्ने भन्ने अवगत गर्छ। मान्छेका सीमित साधन र असीमित आवश्कता हुन्छन्। त्यही सीमित साधनलाई उच्चतम प्रतिफलका लागि लगाउनु नै व्यापार...
पेट्रोल पुग्यो १०८, डिजेल र मट्टीतेल कति ?
काडमाडौँ । नेपाल आयल निगमले बुधबार राती १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैया मूल्य वृद्धि गरिएको जानकारी निगमले दिएको छ । अब पेट्रोलको बजारमूल्य प्रतिलिटर एक सय आठ रुपैया कायम भएको छ । यसैगरी डिजेल र मट्टीतेलमा समेत मूल्य वृद्धि गरिएको छ । प्रतिलिटर तीन तीन रुपैया मूल्य वृद्धि...
काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । निगमले स्वतःसञ्चालित मूल्य संरचनाबमोजिम पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. एक तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु. दुई/दुई मूल्य वृद्धि गरेको जनाएको छ । समायोजित नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर रु १०६ र डिजेल तथा मट्टितेल...
आउने भो पेट्रोलियम कानून
काठमाण्डौ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार व्यवस्थित बनाउन ‘पेट्रोलियम कानुन’ ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनको आज यहाँ सुरु भएको अधिवेशनमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चुहावट रोक्न र ग्यासको कारोबार व्यवस्थित बनाउन उक्त ऐनको खाँचो औँल्याए । उनका...
अप्रिलमा कच्चा तेलको मूल्य वर्षकै उच्च विन्दूमा, वृद्धि कृत्रिम हुनसक्ने आशंका
नयाँदिल्ली । अप्रिल महिनामा मात्र कच्चा तेलको मूल्यमा २० प्रतिशतको उछाल आएको छ । ७ वर्षको दौरान कच्चा तेलको मूल्यमा एकै महिनामा यत्तिको बढोत्तरी भएको यो नै पहिलो घटना हो । शुक्रबार ब्रेन्ट क्रूडको मूल्य प्रति ब्यारेल ४८.१४ डलर पुगेको छ । डब्लूटीआई क्रूडको मूल्य प्रति ब्यारेल ४५.९६ डलर पुगेको छ । अप्रिल महिनामा मात्रै ब्रेन्ट क्रूड...
भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि, नेपालमा पनि बढ्ने !
एजेन्सी । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै भारतीय बजारमा पेट्रोल र डिजेलको भाउ समेत बुधबार वृद्धि भएको छ । भारतको बजारमा बुधबारदेखि प्रति लिटर पेट्रोल ३.०७ भारु(४ रुपैयाँ ९१ पैसा) र डिजेल १.०९(१ रुपैयाँ ७४ पैसा) भारु महङ्गो भएको हो । त्यहाँ कायम भएको नयाँ मूल्य बुधबार रातिदेखि नै लागू हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । बढेको...